GV Face: Resadresaka Miaraka Amin’ilay Mpikatroka Tsy Tian’i Bahrain Hifampiresaka Amintsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2014 19:29 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Swahili, عربي, Español, English
Nahita ny fianakaviana Al Khawaja fa tafiditra tao anatin'ny fihetsiketsehana goavana ao Bahrain ry zareo, hatramin'ny nisian'ilay antsoina hoe Lohataona Arabo tao amin'ny nosy-fanjakana kely tamin'ny 14 Febroary 2011.
Any am-ponja amin'izao fotoana izao ilay mpikatroka ny zon'olombelona malaza Abdul Hadi Al Khawaja, migadra mandra-pahafatiny noho ny andraikitra noraisiny tamin'ny fihetsiketsehana.
Raha mitodika any amin'ny media sosialy, niditra tao amin'ny Twitter ireo zanany vavy Maryam, 27 taona sy i Zainab Al Khawaja, 31 taona, mba hizara amin'ireo mpanjohy azy ireo manerantany ny tantarany sy izay zava-mitranga ao amin'ny fireneny. Amin'ireo mpanjohy 102K sy 48.8K azy roa vavy ao amin'ny Twitter, rahonan'ny manampahefana noho ny fanehoan-keviny hatrany i Maryam sy i Zainab.
Any am-ponja i Zainab amin'izao fotoana izao noho izy nandrovitra ny sarin'ny mpanjaka tao amin'ny fitsarana. Voatery nandao an'i Bahrain i Maryam rehefa avy notànana tao amin'ny seranam-piaramanidina raha saika hitsidika ny rainy. Rehefa avy nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina i Maryam, noampangaina ho nidaroka polisy iray. Nolavin'i Maryam ireo fiampangana azy. Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina izy tany am-pigadrana. Navotsotra tany am-ponja izy tamin'ny 19 Septambra rehefa avy nandòa onitra ary nandao ny firenena avy eo. Mbola any am-ponja ny rainy. Mpiara-mitantana ny Foiben'ny Zon'olombelona ao amin'ny Helodrano i Maryam.
Miditra amin'ny taona faha-telo amin'ny famoretany fitroaram-bahoaka i Bahrain. Mitatitra ny fihetsiketsehana ao Bahrain ho toy ny revolisiona tarihin'ny Shiita manohitra ny fitondrana Sonita ny fampahalalam-baovao iraisampirenena. Raha maro ireo mety mahita fa tsy misy zavatra diso amin'izany famariparitana izany, toa hamaivanina loatra izany fa tsy mitaratra mihitsy ny zava-mitranga eny ifotony. Tsy mahafantatra izy fa ny Bahrainita izay mitsangana manohitra ny fitondrana dia tsy manao izany amin'ny maha-Shiita azy ireo na koa hoe Sonita ny fitondrana.
Amin'ity fizarana GV Face ity, hiresaka amin'i Maryam Al Khawaja isika
Miresaka amin'i Maryam Al Khawaja momba ny anjara toeran'ny fivavahana ao Bahrain sy ny fomba fiantraikan'izany amin'ny hetsika izahay. Iza no lasibatra ary iza no mpampisaraka ara-pivavahana? Ahoana ny ny fomba fampijaliana ara-pivavahana atao hatrany hatrany ho mahazatra ao Bahrain ? Ary nahoana no lazaina fa miteraka fisarahana ara-pivavahana ny fitroarana ao Bahrain?